Tuesday January 09, 2018 - 20:59:57 in Wararka by Super Admin
Wakaaladda Wararka Sharqal Awsat ee ku dhow xukuumadda Masar iyo Telefeshinka Rasmiga ah ee wadankaas ayaa faafiyay muuqaalka Cabdi Fataax Alsiisi oo madaxweynaha Ereteria kusoo dhoweynaya magaalada caasimadda ah ee Al Qaahira.
Booqasho kedis ah ayuu Hoggaamiyaha Ereteria ku joogaa wadanka Masar halkaas oo kulamo lagu sheegay xasaasi kula yeelanayaan mas’uuliyiin iyo saraakiil ciidan.
Socdaalka Isaias Afwerki ee magaalada Al Qaahira ayaa yimid waqti ay cirka iskusii shareereen xiisadaha colaadeed ee u dhaxeeya Afar Dowladood oo daris ah kuwaas oo isku haya qeybsiga biyaha Wabiga Niil marka laga reebo Ereteria oo iyadu aan wax saameyn ah ku laheyn arrinta Niil balse lasafan dhanka Masar.
Ilo wareedyo ayaa sheegay in Hoggaamiyaha Masar uu madaxweynaha Ereteria kala hadli doono loolanka dhanka melleteriga ah ee Geeska Afrika kusoo kordhay waxaana soo baxaya warar sheegaya in Masar ay Kumanaan Askari ku daad gureysay xuduudda ay wadaagaan Sudan iyo Ereteria.
Guddoomiyaha Gobolka Kasala ee kulaala xuduud beenaadka dhanka Ereteria iyo Sudan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ay heegan geliyeen ciidamada melleteriga iyo kuwa difaaca shacabka si looga hortago wax uu ugu yeeray duullaan cudwaani ah.
Booqashada Isaias Afwerki uu ku tagay wadanka Masar waa middo 5-aad, waxaana jira isbahaysi laba geesood ah oo u dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan halka Masar ay naf ka raadinayso dowladda caalamka ka go’doonsan ee Asmara.
Dhinaca kale taliyaha Guud ee ciidanka Melleteriga Suudaan Jeneraal Cimaaddu diin Cadwi ayaa socdaal aan horay loosii qorsheyn ku tagay magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya halkaas oo uu kulan kula qaatay wasiirka difaaca iyo R/wasaaraha Xabashida.
Shabakadda Sudan Tribune ayaa faafisay in socdaalkan uu salka ku haayo iskaashi melleteriga iyo qiimeynta xiisadaha kajira gobolka.
Dowladda Itoobiya ayaa lafilayaa in bartamaha sanadkan ay soo gaba gabeyso Biya xireenka Murunka badan dhaliyay ee Alnahda kaas oo lafilayo in uu nuqsaamiyo biyaha wabiga Niil oo nolosha Malaayiin qof Masaari ah ku tiirsantahay.